7th Mile Condominium လူနေအိမ်ခန်းများကို စတင်ရောင်းချပေးနေပါပြီ - Myanmar Mega Property Co., Ltd
7th Mile Condominium လူနေအိမ်ခန်းများကို စတင်ရောင်းချပေးနေပါပြီ
7th Mile Condominium, Mayangone Township.
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အသည်းနှလုံး ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ တည်ရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ၂၁ ထပ်အမြင့်ရှိ 7th Mile Condominium ရဲ့လူနေအိမ်ခန်းများကို ရောင်းချပေးမှာပါ
တည်နေရာအနေအထားအရ အချက်အချာကျသလို မြေပိုင်ဆိုင်ကလည်း ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားလို့ အချိုးကျမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့အတူ လူကြီးမင်းတို့အတွက် အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့ စိတ်အချရဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံတစ်ခု ဖြစ်မှာနော်… ဆိတ်ငြိမ် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတူ Resident only ဖြစ်တဲ့အတွက် သီးသီးသန့်သန့်နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်
7th Mile Condominium မှာဆိုရင် အထင်ကရ အင်းယားကန် View နဲ့ City View ဆိုပြီး အခန်းအမျိုးအစားနှစ်ခုခွဲထားပါတယ်
အခန်းအကျယ်အဝန်း 950sqft ကနေ 1280sqft အထိကျယ်ဝန်းပြီးတော့ 1sqft ကို ကျပ် ၂သိန်းကျော်ကနေစပြီး 50% Down Payment နဲ့(၁၀) လအရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
အိမ်ခန်းတစ်ခန်းခြင်းစီအတွက်ပေးထားတဲ့ Facilities တွေကလည်း Modern Living Style နဲ့အညီ အပြည့်ရှိနေမယ်… မီးဘေးအန္တရာယ်အတွက် ကာကွယ်ရေးစနစ်ကလည်း နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အပြည့်အဝထားပေးထားတယ်…ဒါတင်မကသေးဘူး နေထိုင်သူတွေလုံခြုံရေးအတွက် ကွန်ဒိုသာယာရေး တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ CCTV တွေကလည်း ၂၄ နာရီအပြည့်ရှိနေမှာပါနော်
ဒါ့အပြင် Basement ကနေ (၃) လွှာအထိ ကားပါကင်ထားရှိပေးထားတဲ့အပြင် တည်နေရာအရ အချက်အချာနေရာဖြစ်နေတော့ မြို့တွင်းပဲသွားသွား၊ မြို့ပြင်ကိုပဲသွားသွား အချိန်မကုန်တော့ဘူးပေါ့
တည်ဆောက်ရေးပိုင်းမှာလည်း အကြမ်းထည်ပြီးစီးမှုက ၇၀% အထိပြီးစီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Structure ဆောက်လုပ်ပြီး (၁၁) လအကြာမှာ အသင့်နေထိုင်နိုင်တော့မယ့် ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်က တစ်ခုတည်းသော (၂၁) ထပ်အမြင့်ရှိ 7th Mile Condominium ကြောင်း စိတ်ဝင်စားလို့ အပြည့်အစုံသိလိုတယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
Address: 7th Mile Condominium, Mayangone Township.
Hello, I am interested in [7th Mile Condominium လူနေအိမ်ခန်းများကို စတင်ရောင်းချပေးနေပါပြီ]
November 28, 2021	150 views